Akwụkwọ Ahịa na Nyocha | Martech Zone
Akwụkwọ ahịa na nyocha akwụkwọ Martech Zone
Teknụzụ Mgbasa Ozi Nchịkọta & Ule content Marketing CRM na nyiwe data Ecommerce na etalọ nkwari akụ Ahịa Email & Email Marketing Automation Teknụzụ na-apụta Mmemme Azụmaahịa Vidio Ahịa & Ahịa Akwụkwọ Ahịa Ihe omume Infographics Ahịa Ngwaahịa Ahịa Ọzụzụ Azụmaahịa Martech Zone Apps Mobile na Mbadamba ụrọ Mmekọrịta ọhaneze Nkwado ire ahịa Chọọ Marketing Social Media Marketing
Budata: Ntuziaka doro anya na nke zuru ezu maka Ahụmịhe Akaụntụ (ABX)
Demandbase na-agbanwe ụzọ ụlọ ọrụ B2B si aga ahịa. Demandbase Otu bụ ụlọ zuru oke zuru oke nke ngwọta B2B na-aga ahịa, na-ejikọ ahụmịhe na-eduga na akaụntụ, mgbasa ozi, ọgụgụ isi ahịa, na ngwọta data B2B ka ndị otu Marketing na Ahịa na nnukwu ụlọ ọrụ na-eto ngwa ngwa nwere ike ịmekọrịta ngwa ngwa, kesaa ọgụgụ isi, ma nwee uto mgbawa. Onye isi ahia, Jon Miller, edeela ma bipụta akwụkwọ ọhụụ ọhụrụ a mara mma na mgbanwe nke Ahịa Azụmaahịa (ABM)… Ahụmahụ Na-ahụ Maka Akaụntụ (ABX). Kedu
SEO Buddy: Nchọpụta SEO Gị na Nduzi Na-abawanye Nhazi Nhazi Gị
Tuzdee, Machị 2, 2021 Tuzdee, Machị 2, 2021 Douglas Karr
The SEO Checklist site SEO Buddy bụ ụzọ gị maka ihe ọ bụla dị mkpa SEO ị ga-eme iji bulie weebụsaịtị gị ma nweta ọtụtụ okporo ụzọ. Nke a bụ ngwungwu zuru oke, n'adịghị ka ihe ọ bụla m hụla na ntanetị, na-enyere aka na azụmaahịa na-enyere ha aka ịga n'ihu na-ebuli saịtị ha ma bulie ọhụụ ha na ọchụchọ. The SEO Checklist Gụnyere 102-Point SEO Checklist Google Sheet Ihe 102-Point SEO Checklist Web Ngwa Ihe 62 Page
Technologymụta Teknụzụ Dị Mkpa Dị ka Onye Nlekọta CRM: Lee ụfọdụ akụrụngwa
Mọnde, Jenụwarị 18, 2021 Friday, April 23, 2021 Katarzyna Banasik
Kedu ihe kpatara ị ga-eji mụta nkà na ụzụ dị ka onye njikwa CRM? N’oge gara aga, ka ị bụrụ ezigbo Njikọ Mmekọrịta Ndị Ahịa ị chọrọ na akparamaagwa na nka ahịa ole na ole. Taa, CRM bụ egwuregwu egwuregwu karịa nke mbụ. N'oge gara aga, onye njikwa CRM na-elekwasị anya na otu esi emepụta oyiri email, onye nwere ọgụgụ isi karị. Taa, ezigbo ọkachamara CRM bụ injinia ma ọ bụ ọkachamara data nwere ihe ọmụma bụ isi
Akwụkwọ AdTech: Ihe Nweta Na-enweghị Ntanetị iji Mụta Ihe Niile Banyere Teknụzụ Mgbasa Ozi
Coslọ ọrụ mgbasa ozi n'ịntanetị nwere ụlọ ọrụ, sistemụ teknụzụ, na usoro ọrụ ntanetị dị mgbagwoju anya niile na-arụkọ ọrụ ọnụ iji nye ndị ọrụ ntanetị mgbasa ozi na ịntanetị. Mgbasa ozi n'ịntanetị ewetawo ọtụtụ ihe ọma. Maka otu, enyere ya ndị na-emepụta ọdịnaya nwere isi mmalite ego ha nwere ike kesaa ọdịnaya ha n'efu na ndị ọrụ ntanetị. A na-enyekwa ya ohere ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi na teknụzụ dị ugbu a na-eto eto. Agbanyeghị, ebe mgbasa ozi n'ịntanetị
Nyere Ndi Isi Mgbasa Ahịa Aka
Sọnde, Febụwarị 3, 2019 Sọnde, Febụwarị 3, 2019 Douglas Karr
Oge izizi m zutere Mark Schaefer, enwere m ekele ozugbo maka ahụmịhe ya na nghọta miri emi ya. Mark na ụlọ ọrụ ndị isi na - arụ ọrụ maka otu esi emeziwanye ahịa ha. Ọ bụ ezie na abụ m onye tozuru etozu na ụlọ ọrụ a, m na-elegara ndị ndu ole na ole anya maka ọhụụ - Mark bụ otu n'ime ndị isi ahụ m na-ege ntị. Ezie na Mark bu a gogo ochie vetikal nke ahia, M ekele na o wuru na isi-akpa na